China Plastic prototype Emeputa na Supplier | Meste
Maka ngwaahịa plastik chọrọ ịkpụzi ebu, anyị na-eme ụfọdụ anụ ahụ plastic prototypeiji nyochaa njirimara ya. Ọ na-ezo aka na otu ma ọ bụ ọtụtụ ụdị arụmọrụ emere site na ịbịaru ngwaahịa ma ọ bụ ihe osise na-enweghị mmeghe ebu iji lelee ọdịdị nke ọdịdị ma ọ bụ usoro. A na-akpọkwa ihe ngosi plastik n'ebe dị iche iche dị ka ihe ngosi plastik, ụdị, mackup.
Ihe ngosi plastik bu uzo di nkpa iji nyochaa imeputa ihe na ihe ngosi. Ọ dabere na eserese ihe eji emepụta ngwaahịa, na-eji nhazi igwe akụrụngwa ma ọ bụ ọgwụgwọ laser ma ọ bụ usoro njikọ iji mepụta ihe atụ maka ịtụle nhazi na ngosi. Mgbe anyị na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ, a na-emekarị ihe atụ dịka ọdịdị ngwaahịa ma ọ bụ eserese eserese iji lelee ọdịdị ma ọ bụ usoro ezi uche nke ndebiri arụmọrụ. Ime prototype bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji nyochaa njirimara ngwaahịa ma belata ihe egwu dị n'ichepụta ihe.
Ebumnuche iji nye usoro kachasị dị mma iji mepụta ụdị ihe nrụpụta gị na ngwa ọrụ anyị, ndị injinia ihe eji emepụta ihe bụ ndị a iji nye gị atụmatụ maka imepụta ọrụ iji hụ na ngwaahịa (s) gị dabara adaba maka ndị na-emepụta ngwaahịa plastik. Site na nyocha nke ọma na nhọrọ ihe eji eme ihe, anyị nwere ike iwusi ntụkwasị obi nke ọrụ gị ike ma nye ọrụ ngwangwa ngwa ngwa ịja mma maka imewe ahụ- nke a na-enye ohere zuru oke maka nnwale arụmọrụ nke ga-egosipụta mgbanwe ọ bụla enwere ike ịme iji mepụta ka ọ dabara maka ahịa gị. Nke a na achi achi na ngwaahịa imewe mbipụta adịghị abanye ndị na-elu ogbo nke ebu mmepụta, zere mbubreyo ọdịda na nnukwu na-eri n'efu. Maka ngwaahịa mmepụta ihe buru ibu, ma ọ bụ ngwaahịa eletrọniki dị mgbagwoju anya, akụrụngwa eletriki, ụgbọala, akụrụngwa ọgwụ, ezé ezé, iko mmiri na ihe ndị ọzọ dị mkpa kwa ụbọchị, na usoro imepụta ngwaahịa, a ga-eme ụdị nlele iji nyochaa ma nyochaa njirimara teknụzụ, teknụzụ. na akụkụ ahịa, ma na-emezi njikarịcha njikarịcha oge niile. Nweta nsonaazụ kacha mma.
Dị na ojiji nke ihe eji eme plastik
1. Ọdịdị prototype: Ná mmalite nke usoro imepụta ngwaahịa ọhụụ, mee ka ụdị ngosipụta ahụ wee nyochaa ma melite ọdịdị ọdịdị dị iche iche nke ngwaahịa ahụ, wee họrọ atụmatụ dị oke mma ma mara mma maka ndị ahịa.
2. Structural ụdị:Mgbe ngwaahịa Ọdịdị imewe na-agwụ agwụ, ejikari na prototype e mere dị ka bughi imewe ịbịaru tupu ebu n'ichepụta. The mmebe achọpụtazi Ọdịdị imewe prototype iji chọta ihe ntụpọ na imewe tupu, ma melite na-ebuli imewe, iji zere ihe ize ndụ na n'ichepụta.
3. Ọrụ prototype: Na nzaghachi ka ndị ahịa mkpa ma ọ bụ ahịa nkwado mkpa, ndị prototype na-tupu-egosi na ahịa na ndị ahịa tupu ebu mere ma ọ bụ ebu na-adịghị agwụ agwụ.
Ọdịdị / Nrụpụta ihe owuwu
Ihe ngosi ọrụ
E nwere isi teknụzụ ise iji mee ihe ngosi plastik
1. CNC machining:Ihe nlere bu kari site na mkpochapu. N'izo aka na ntinye ihe eji emeputa ihe, a na-ewepu ihe a na-ejighi oru site na oghere siri ike site na igbutu ihe eji eme ihe na igwe ihe eji ebipu ya, ma a na-enweta akuku ndi kwekọrọ na nha na odidi. Mgbe nhazi CNC, achọrọ ụfọdụ nhazi akwụkwọ ntuziaka.
--- Uru: akụkụ nwere ike ịme ihe dị iche iche dịka mkpa; akụkụ ndị e mere nwere ezigbo nkenke, ike na enweghị mgbagha; mfe iji nweta mma dị elu karịa, dị mfe agba, electroplating na mbipụta ihuenyo. Kwesịrị ekwesị maka ihe atụ na mgbakọ mgbakọ, akụkụ na-akpụ akpụ, akụkụ buru ibu, akụkụ nwere ọdịdị ịchọ mma, na igwe ọrụ. Oge Mbuga ozi bụ 7-8 ụbọchị. O kwesịrị ekwesị maka ịme ka ọdịdị ha pụta, na-arụ ọrụ izizi ma na-arụpụta usoro.
--- Akụrụngwa: ABS, PC, POM, PMMA, naịlọn, wdg.
--- Ọghọm: Ọghọm bụ mkpa maka ụfọdụ ego nke nhazi akwụkwọ, ụgwọ dị elu. Ihe mgbagwoju anya nke ihe owuwu a, onu ogugu kariri.
2. SLAma ọ bụ stereolithography Prototyping - SLA teknụzụ na-eme ka otu oyi akwa site na ikpu nyocha laser. Site na ultraviolet laser doo, dị ka e mere cross ngalaba nke mbụ oyi akwa, gwọọ mgbe site ebe, si ebe na akara, si akara na elu, site na ije nke na-eweli n'elu ikpo okwu, atọ akụkụ ebi akwụkwọ na-dechara site stacking oyi akwa site na oyi akwa . E wepụrụ ihe ngosi ahụ na tank ma dozie ya n'okpuru oriọna ultraviolet. Dabere na mgbagwoju anya, ụbọchị nnyefe nwere ike ịdị mkpụmkpụ dịka ụbọchị 2-3.
3. SLSma ọ bụ nhọrọ laser na-emegharị. Nke a na-agụnye ihe owuwu sitere na 3D data site na iji resin powders na lasers. Enwere ike iji ọkwa a tụrụ atụ iji nye ụfọdụ ọrụ, gụnyere ihe mgbanye "mbughari". Elibọchị nnyefe nwere ike ịbụ ụbọchị 2-3, dabere na mgbagwoju anya. N'oge usoro nsị nke SLS, ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ntụ (ma ọ bụ ihe nrachi ya) eruola ebe mgbaze, ọ gaghị enwe ike ịfe nke ọma ma jupụta oghere dị n'etiti ntụ ntụ. Ya mere, elu nke akụkụ ahụ bụ ihe rụrụ arụ ma sie ike.
--- Uru: Ezigbo ike, ọ naghị adị mfe nrụrụ, mmetụta na-eguzogide, nwere ike iguzogide ibu na ụfọdụ igwe ọrụ. Ọ dị mfe ijikọ. Nguzogide corrosion. O kwesịrị ekwesị maka ịme ụdị ihe owuwu.
--- Ihe: Iji ntụ ntụ nylon, polycarbonate ntụ ntụ, acrylic polymer powder, polyethylene powder, naịlọn ntụ ntụ gwakọtara na 50% iko beads, elastomer polymer ntụ ntụ, seramiiki ma ọ bụ metal na nragide ntụ ntụ na ihe ndị ọzọ, arụmọrụ tụnyere.
--- ọghọm: ezighi ezi akụkụ na ogo elu. Ejiri maka ụdị ihe atụ nke anaghị achọ ogo dị elu.
4. Agụụ prototype(Agụụ na-ejuputa) agụụ ịmụpụta bụ ụzọ nke na-eme ka obere ogbe ụdị. Ọ na-eji nke mbụ prototype (CNC prototype ma ọ bụ SLA prototype) na-eme silica jel ebu na agụụ, ma na-eji Pu ihe wụsa agụụ, ka mmepụta oyiri otu oyiri dị ka mbụ prototype, nke nwere mma okpomọkụ na-eguzogide, ike na ekweghị ekwe karịa mbụ prototype. Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ set, ọ kwesịrị ekwesị iji usoro a, nke na-ebelata ọnụahịa ahụ.。 Akụrụngwa nwere ike inye ọtụtụ ihe ịme anwansị iji mezuo ụfọdụ akụrụngwa nke akụkụ ịkpụzi ọgwụ. Elibọchị nnyefe nwere ike ịbụ ụbọchị 7-10, dabere na mgbagwoju anya.
--- Uru: Ọ dị mkpa iji CNC ma ọ bụ SLA usoro iji mee ihe nlele mbụ, nke kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ set ruo ọtụtụ usoro nke obere batches nke ihe atụ. Ọnọdụ nkwụsi ike, ike na ike dị elu karịa ihe atụ nke SLA, nke dị nso na prototype CNC. O kwesịrị ekwesị maka ime ka ọdịdị ha pụta. Izi ezi arụmọrụ na nhazi ụdị.
- Ihe: A na-ejikarị resin Pu eme ihe, mana ọ nwekwara ike inye ọtụtụ ihe ịme anwansị.
--- Ọghọm: Adabaghị maka akụkụ nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya. Ọnụahịa dị ala karịa nke nke CNC samples.
5. RIM (Reaction Ọgwụ na ịkpụzi) bụkwa ojiji nke mbụ prototype (CNC prototype ma ọ bụ SLA prototype) mere nke silica jel ebu, mmiri mmiri abụọ-akụrụngwa polyurethane Pu na-agbara ndi mmadu n'ime ngwa ngwa ebu na ụlọ okpomọkụ na ala nsogbu gburugburu ebe obibi, gwọọ na post - na-arụ ọrụ iji nweta ihe ntanetị dị mkpa.
--- Uru: A na-eji ya maka obere ogbe mmegharị nke ogwe ndị dị mfe ma buru ibu ma mepụta nnukwu ngwaahịa siri ike na mgbidi na-enweghị edo. Ọ nwere uru nke arụmọrụ dị elu, usoro nrụpụta dị mkpụmkpụ, usoro dị mfe na ọnụ ala.- Ihe: polyurethane PU abụọ.
--- Ọghọm: Ihe eji eme bu otu.
Prototype elu ọgwụgwọ: polishing, sere, silk obibi akwụkwọ, gilding, electroplating.
Usoro ọ bụla ị na-eme ngwa ngwa nwere ike ịnye ọtụtụ ụdị post-ebucha na usoro eserese, iji mepụta ụdị ọkachamara. N'oge a, ndị injinia anyị nwere ike ịkwado nhọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa iji mepụta ngwaahịa na-atọ ụtọ ma na-arụ ọrụ nke ọma. Dị ka a onye-nkwụsị ọrụ, anyị na-enye gị a usoro nke ọrụ, dị ka ngwaahịa imewe, prototyping, ebu nhazi na Ọgwụ na ịkpụzi, machining, na ngwaahịa nzukọ. Ọ bụ otu n'ime ọrụ iji nye gị ụdị ihe atụ nke plastik na metal. Na usoro mmepe ngwaahịa gị, site na enyemaka anyị zuru oke, anyị nwere ike ijide n'aka na ngwaahịa gị na-abanye n'ahịa ahụ n'ụzọ zuru oke ma na-efu ọnụ.
Prototype nwale bụ akụkụ dị mkpa nke ngwaahịa imewe. Mestech na-enyekwa ihe eji emepụta ngwaahịa, ịkpụzi ngwa ọrụ, ịkpụzi nkedo plastik na ọrụ nzukọ ngwaahịa iji kwadoo usoro ọrụ gị.
Nke gara aga: Metal 3D obibi
Osote: Die mgbatị usoro
Plastic Prototype Ime
Prototype Plastic Akụkụ
Metal 3D obibi